Wacaal darey ah: Nabadoon Cabdiqani Baalle oo caawa Gaalkacyo lagu dilay – Radio Daljir
Wacaal darey ah: Nabadoon Cabdiqani Baalle oo caawa Gaalkacyo lagu dilay
Febraayo 9, 2019 6:51 g 0
Allaha u naxariistee waxaa goor dhawayd magaalada Gaalkacyo lagu dilay Nabadoon Cabdiqani Baalle oo kamid ahaa Nabadoonada caanka ka ah ee gobolka Mudug. Nabadoonka ayaa waxaa toogtay kooxo baastoolado ku hubaysnaa oo aan heebtooda la,aqoonin waxaan la sheegay in ay goobta isaga baxsadeen.
lama oga ilaa iyo haatan sababta loo dilay Nabadoonka balse mudooyinkii u dambeeyay ammaanka magaalada Gaalkacyo ayaa aad u wanaagsanaa mana jirin wax dilal iyo qaraxyo ah oo ka dhacay magaalada tan iyo wixii ka dambeeyay markii la dhisay ciidamada iskudhafka ah ee labada dhinac.
Ciidamada amniga ayaa soo gaaray goobtii uu dilku ka dhacay waxaan socda baaritaan lagu ogaanayo kooxdii dilka fulisay.
Horumarka ka socda magaalada Gaalkacyo ma aha mid la’inkiri karo (dhegayso+Sawiro)